Zon’olombelona… zoin-kolikoly | NewsMada
Par Taratra sur 10/12/2016
Tsingerintaon’ny fanambarana ny zon’olombelona, anio. 68 lasa izay. Andro iraisam-pirenena iadiana amin’ny kolikoly, omaly. Anisan’ny fanambin’izao fitondrana izao ny fanajana ny zon’olombelona sy ny ady amin’ny kolikoly. Mby aiza? Maso miara-mahita etsy, sofi-miara-mandre eroa…
Amin’izao, tsy hita be ihany izay hoe fanajana ny zon’olombelona sy ny fiadiana amin’ny kolikoly, raha tsy hiresaka afa-tsy izay. Ny tsy fanajana ny zon’olombelona no mampahazo vahana ny kolikoly? Na ny fanaovana kolikoly no mahatonga ny zon’olombelona tsy voahaja ho azy…
Tsy fandriampahalemana sy tsy fanjarian-tsakafo, ohatra, no iainan’ny vahoaka isan’andro vaky. Mby aiza, ohatra, ny hoe: manan-jo hiaina, ho afaka, hahazo fiarovana ny olona tsirairay, And. 3 amin’ny Fanambarana ny zon’olombelona; manan-jo ho voaantoka ara-tsosialy, And. 22.
Eo koa ny hoe: mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan’ny lalàna, And. 7; tsy misy olona azo samborina tsy amin’antony, And. 9; afaka manana ny heviny ny olon-drehetra ka hilaza izany an-kalalahana, And. 19. Mba voahaja sy mihatra ve izany amin’ny fanehoan-kevitra eto amintsika?
Misy, ohatra, ireo tsimatimanota, ambony eo anatrehan’ny lalàna. Eo izay sambotsamborina fahatany, izay vao tadiavina izay hanamelohina azy. Tsy ny marina no karohina amin’ny fitsarana mbola fitaovana politikan’ny mpitondra ihany, fa izay helohina hampanginana ny raharaha?
Ahoana koa ny fampiasana herim-pamoretana amin’izay mihetsika haneho hevitra an-kalalahana? Ampangaina ho manakorontana sy manongam-panjakana. Tsy misy olona azo alaina amin-kery ny fananany, And. 17. Nefa ireny ny fandrobana tany sy harem-pirenena etsy sy eroa…
Ohatra ihany ireo nosinganina ireo amin’ny andininy miisa 30. Tsy mahagaga izany rehetra izany, raha manjaka ho azy ny kiantranoantrano, ny tsimatimanota, ny kolikoly, ny lehibe tsy meloka na tsy mba diso… Fototra sy fositra ny tsy fanajan-dalàna. Ao anatin’izany ny zon’olombelona.
Tena mba misy dingana ialana sy isorohana izany ny atao amin’izao sa hetsika ivelany fa tsy fahatsiarovan-tena akory ahay?